Levitikọs 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
19 Jehova wee gwa Mozis okwu ọzọ, sị:
2 “Gwa nzukọ ụmụ Izrel dum okwu, sị ha, ‘Unu ga-adị nsọ,+ n’ihi na mụ onwe m bụ́ Jehova Chineke unu dị nsọ.+
3 “‘Onye ọ bụla tụọ egwu nne ya na nna ya,+ debekwanụ ụbọchị izu ike m.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.
4 Unu echigharịkwurula chi na-abaghị uru,+ unu emerela onwe unu chi a wụrụ awụ.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.
5 “‘Ọ bụrụ na unu achụọrọ Jehova àjà udo,+ unu ga-achụ ya iji nwetara onwe unu ihu ọma.+
6 A ga-eri anụ ya n’ụbọchị unu chụrụ àjà ahụ nakwa n’echi ya, ma a ga-akpọ nke fọdụrụ ruo ụbọchị nke atọ ọkụ.+
7 Otú ọ dị, ọ bụrụ na e rie ya n’ụbọchị nke atọ, ọ bụ ihe rụrụ arụ.+ A gaghị anabata ya nke ọma.+
8 Onye riri ya ga-aza ajụjụ maka njehie ya,+ n’ihi na o merụwo ihe dị nsọ nke Jehova; a ga-ebipụkwa mkpụrụ obi ahụ n’etiti ndị ya.
9 “‘Mgbe unu na-ewe ihe ubi nke ala unu, unu ewerechala ihe dị n’ọnụ ọnụ ubi unu, unu atụtụkọtala ihe unu wefọrọ n’ubi.+
10 Unu aghọrọkwala mkpụrụ unu ghọfọrọ+ n’ubi vaịn unu, unu atụtụkọtala mkpụrụ vaịn dasasịrị n’ubi vaịn unu. Unu ga-ahapụ ha maka ndị nọ n’ahụhụ na ndị mbịarambịa.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.
11 “‘Unu ezula ohi,+ unu aghọla aghụghọ,+ unu emesola mmadụ ibe unu ihe n’ụzọ aghụghọ.+
12 Unu ejila aha m ṅụọ iyi ụgha,+ ka unu wee ghara imerụ aha Chineke unu. Abụ m Jehova.
13 Unu erigbula mmadụ ibe unu,+ unu apụnarala mmadụ ihe.+ Ụgwọ ọrụ nke onye ọrụ e goro ego agaghị anọbọ chi n’aka unu.+
14 “‘Akọchala onye ntị chiri, edebekwala ihe mkpọbi ụkwụ n’ihu onye ìsì;+ tụọ egwu Chineke gị.+ Abụ m Jehova.
15 “‘Unu ekpela ikpe na-ezighị ezi. Unu elela onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya anya n’ihu mgbe unu na-emeso ya ihe,+ unu enwela mmasị karị n’ebe onye ukwu nọ.+ Unu ga-ekpe mmadụ ibe unu ikpe ziri ezi.
16 “‘Agagharịla n’etiti ụmụnna gị iji kwutọọ mmadụ.+ Ebilila ịwụfu ọbara mmadụ ibe gị.+ Abụ m Jehova.
17 “‘Akpọla nwanna gị asị n’ime obi gị.+ Ị ghaghị ịdọ mmadụ ibe gị aka ná ntị,+ ka ị ghara iso ya buru mmehie ya.
18 “‘Abọla ọbọ,+ eburula ụmụ ndị gị+ iwe n’obi; hụ mmadụ ibe gị n’anya dị ka onwe gị.+ Abụ m Jehova.
19 “‘Unu ga-edebe ụkpụrụ m: Unu emela ka ụdị anụ ụlọ abụọ dịgasị iche gbaa onwe ha. Unu aghakọtala ụdị mkpụrụ abụọ n’ubi unu,+ unu eyikwala uwe abụọ nke e ji ụdị eriri abụọ e jikọtara ọnụ kwee.+
20 “‘Ọ bụrụ na nwoke na nwaanyị edinaa, ọbara ọcha ewee pụta, mgbe nwaanyị ahụ bụ nwaanyị na-ejere nwoke ọzọ ozi, a gbapụtabeghịkwa ya n’ụzọ ọ bụla, e mebeghịkwa ka o nwere onwe ya, a ga-enye ntaramahụhụ ya. A gaghị egbu ha n’ihi na a hapụbeghị ya ka o nwere onwe ya.
21 Nwoke ahụ ga-ewetara Jehova àjà ikpe ọmụma ya n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, bụ́ ebule àjà ikpe ọmụma.+
22 Onye nchụàjà ga-eji ebule àjà ikpe ọmụma ahụ kpuchiere ya mmehie ya n’ihu Jehova; a ga-agbaghakwara ya mmehie o mere.+
23 “‘Ọ bụrụ na unu abata n’ala ahụ, unu akụọkwa osisi ọ bụla maka iri mkpụrụ ya eri, unu ga-ewere mkpụrụ ya dị ka ihe na-adịghị ọcha, dị ka “apị́” ya. Ọ ga-abụrụ unu ihe a na-ebighị úgwù ruo afọ atọ. A gaghị eri ya eri.
24 Ma n’afọ nke anọ ya, mkpụrụ ya niile+ ga-aghọ ihe dị nsọ nye Jehova maka ememme obi ụtọ.+
25 N’afọ nke ise, unu pụrụ iri mkpụrụ ya; unu mee otú a, ọ ga-amịkwuru unu mkpụrụ.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.
26 “‘Unu erikọtala ihe ọ bụla na ọbara.+
“‘Unu achọla ihe mgbaàmà maka ọdịnihu,+ unu emekwala anwansi.+
27 “‘Unu akpụlatala ajị ndị dị n’akụkụ ntì unu, unu akpụchapụkwala ọnụ ọnụ ajị agba unu.*+
28 “‘Unu ebekasịla ahụ́ unu maka mkpụrụ obi nwụrụ anwụ,+ unu egbukwala egbugbu n’ahụ́ unu. Abụ m Jehova.
29 “‘Emerụla nwa gị nwaanyị site n’ime ka ọ ghọọ akwụna,+ ka ala a ghara ịbụ nke na-agba akwụna, omume rụrụ arụ ewee jupụta n’ala a.+
30 “‘Unu ga na-edebe ụbọchị izu ike m,+ unu ga na-atụkwa ebe nsọ m ụjọ.+ Abụ m Jehova.
31 “‘Unu echigharịkwurula ndị na-agba afa,+ unu ajụkwala ndị ọrụ ha bụ ịkọ ọdịnihu ase,+ ka ha ghara ime ka unu bụrụ ndị na-adịghị ọcha. Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.
32 “‘Ị ga-ebiliri onye isi awọ́,+ sọpụkwara onye mere agadi,+ tụọkwa egwu Chineke gị.+ Abụ m Jehova.
33 “‘Ọ bụrụ na onye mbịarambịa ebiri n’etiti unu dị ka ọbịa n’ala unu, unu emegbula ya.+
34 Onye mbịarambịa nke bi dị ka ọbịa n’etiti unu ga-adịrị unu ka nwa afọ; unu ga-ahụkwa ya n’anya dị ka onwe unu,+ n’ihi na unu ghọrọ ndị mbịarambịa n’ala Ijipt.+ Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu.
35 “‘Kwụwanụ aka ọtọ mgbe unu na-ekpe ikpe,+ mgbe unu na-atụ ihe n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀,+ mgbe unu na-atụ ịdị arọ ihe n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ma ọ bụ mgbe unu na-atụ ihe dị mmiri mmiri.
36 Unu ga-enwe ihe ọ̀tụ̀tụ̀ ziri ezi,+ ihe ziri ezi e ji atụ̀ ịdị arọ ihe, ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa ziri ezi na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ hin ziri ezi. Abụ m Jehova bụ́ Chineke unu, onye kpọpụtara unu n’ala Ijipt.
37 Ya mere, unu ga-edebe ụkpụrụ m niile na mkpebi ikpe m niile, debenụ ha.+ Abụ m Jehova.’”
^ Le 19:27*
O yiri ka ihe a na-ekwu ọ̀ bụ omume ụfọdụ nke ndị na-ekpere arụsị, ọ pụtaghị na ha apụghị ịkpụlata ajị agba ha ma ọlị.
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D3%26Chapter%3D19%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl